I-Albendazole Bolus 2500mg
I-Albendazole iyi-anthelmintic yokwenziwa eseqenjini le-benzimidazole-derivatives elinomsebenzi olwa nezinhlobonhlobo zezikelemu kanye nezinga eliphakeme lokulinganisa futhi nasezigabeni zabantu abadala zesibindi. I-Pharmacological Action Albendazole ihlangene ne-eelworm's microtubule protein futhi idlala indima. Ngemuva kokuthi i-albenzene ihlanganiswe ne-β- tubulin, ingavimbela ukuncipha phakathi kwe-albenzene ne-α i-tubulin ehlangana ibe ama-microtubules. Ama-Microtubules ayisakhiwo esiyisisekelo se-m ...
Izinkomba Thuthukisa ukusebenza kokukhula nokuzala. Uma kwenzeka kushoda amavithamini, amaminerali kanye nokulandela umkhondo. Lapho ushintsha imikhuba yokudla Siza isilwane ekululameni ngesikhathi sokululama. Ukwengeza ngesikhathi sokwelashwa kwama-antibiotic. Ukumelana okuthe xaxa nokutheleleka Ngaphezu kwalokho ngesikhathi sokwelashwa noma sokuvimbela isifo sesimuncagazi. Khulisa ukumelana ngaphansi kwengcindezi. Ngenxa yensimbi yayo ephezulu, amavithamini kanye nokulandela umkhondo wezinto, kuyasiza Isilwane ukuba silwe nokushoda kwegazi nokusheshisa ukubuyiselwa kwaso ...
Isikali sokuphathwa ngomlomo. Izinkomo, izimvu, izimbuzi nezingulube: 1 ithebhulethi / 70kg isisindo somzimba. Izexwayiso Ezikhethekile Azisetshenziswanga ngesikhathi sokubekela izikhukhukazi. Kungadala ukungalingani kwezitshalo zamathumbu, imishanguzo yesikhathi eside ingadala ukwehla kukavithamini B novithamini K synthesis kanye nokumuncwa, kufanele kungeze amavithamini afanele. Ukusabela Okubi Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kungalimaza izinso nohlelo lwezinzwa, kuthinte ukuzuza kwesisindo, futhi kungahle kwenzeke ubuthi be-sulfonamides. Isikhathi sokuhoxa C ...
I-AdvaCare ingumkhiqizi we-GMP we-Levamisole Hydrochloride Boluses. ILevamisole HCL Bolus ingeyesigaba samakhemikhali esaziwa njenge-imidazothiazoles futhi imvamisa iyindondo yokukhetha amanani aphansi ejwayelekile yemfuyo. Kuvame ukusetshenziswa njengosawoti we-chloralhydrate, futhi kwesinye isikhathi njenge-phosphate. ILevamisol HCL ivimba ukusetshenziswa kwezinja nasemakati kungaphansi kwemfuyo. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ama-AdvaCare's levamisole HCL boluses enzelwe ukwelashwa kwezilwane kuphela, kufanele usebenzise kuphela uhlobo olune ...
Ivermectin kungokwelungu leqembu lama-avermectin futhi lisebenza ngokulwa nezikelemu eziyizilokazane nama-parasites. Izinkomba Ukwelashwa kwemisundu eyizikelemu emathunjini, izintwala, izifo zamaphaphu, i-oestriasis kanye notwayi ezinkomeni, ezinkomeni, ezimbuzini, ezimvwini nasezingulubeni. Izimpawu zokuphikisana Ukuphathwa kwezilwane ezincelisayo. Imiphumela engemihle Lapho ivermectin ihlangana nenhlabathi, ibopha kalula futhi iqinise inhlabathi futhi ingasebenzi ngokuhamba kwesikhathi. Ivermectin yamahhala ingathinta kabi izinhlanzi namanye amanzi ...
I-Oxytetracycline ingeyeqembu le-tetracyclines futhi isebenza nge-bacteriostatic emelene namagciwane amaningi we-Gram-positive ne-Gram-negative afana neBordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus kanye ne-Streptococcus spp. Isenzo se-oxytetracycline sincike ekuvinjelweni kwamaprotheni synthesis synthesis. I-Oxytetracycline ikhishwa kakhulu emchameni, engxenyeni encane enyameni nasezilwaneni ezincelisayo obisini. Umjovo owodwa usebenza ...
I-Tylosin iyi-antibiotic ye-macrolide enesenzo se-bacteriostatic elwa namagciwane we-Gram-positive ne-Gram-negative afana neCampylobacter, iPasteurella, iStaphylococcus, iStreptococcus neTreponema spp. kanye neMycoplasma. Izinkomba Ukutheleleka kwamathumbu nokuphefumula okubangelwa yi-tylosin micro-organisms, njengeCampylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus neTreponema spp. kumathole, izinkomo, izimbuzi, izimvu nezingulube. Izinkomba ze-Contra Hypersensitivity to ...
ILevamisole iyi-anthelmintic yokwenziwa enomsebenzi obhekene nobuningi bezikelemu zesisu kanye nezibungu zamaphaphu. ILevamisole ibangela ukwanda kwethoni yemisipha ye-axial elandelwa ukukhubazeka kwezikelemu. Izinkomba Prophylaxis kanye nokwelashwa kokutheleleka kwesisu namaphaphu njenge: Amathole, izinkomo, izimbuzi, izimvu: I-Bunostomum, i-Chabertia, i-Cooperia, i-Dictyocaulus, i-Haemonchus, i-Nematodirus, i-Ostertagia, i-Protostrongylus ne-Trichostrongylus spp. Izingulube: I-Ascaris suum, i-Hyostrongyl ...
Njengamanje, inkampani inabasebenzi abangama-216 abaneziqu zasekolishi noma ngaphezulu, ebalwa ngama-80% enani eliphelele lenkampani.
Ukusinda kwekhulu leminyaka, ukufuya izilwane kunamandla, ezolimo zichuma
Izinhlobo ezine zemithi emisha kazwelonke, izinhlobo eziyisithupha zemikhiqizo yobunikazi nezinhlobo ezintathu zezindlela zokulungiselela amagunya obunikazi zisetshenzisiwe.
Imikhiqizo yayo ithunyelwa emazweni ayi-15 (Ethiopia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, njll).
I-Hebei Lihua Pharmaceutical Co, Ltd ibhizinisi elisezingeni eliphezulu eligxile kwezentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe zemithi yezilwane, enenhlokodolobha ebhalisiwe engu-80 million yuan.
Ngomsebenzi we "Iminyaka Eyikhulu Eyodwa Yokuphila, Ukufuya Okunamandla Kwezilwane Nokuchuma Kwezolimo", inkampani izibophezele ekubeni ngumhlinzeki womkhiqizo wokwelashwa kwezilwane osezingeni eliphakeme ngokususelwa kubuchwepheshe namathalente.